We Fight We Win. -- " More than Media ": ခင်ညွန့်အရမ်းလှုပ်ရှားနေတယ် ။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေကို နောက်ကွယ်က နေ လုပ်နေတယ်။
ခင်ညွန့်အရမ်းလှုပ်ရှားနေတယ် ။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေကို နောက်ကွယ်က နေ လုပ်နေတယ်။
ခင်ညွန့်အရမ်းလှုပ်ရှားနေတယ်။ ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင်ကိုရောက်နေတဲ့ခင်ညွန့် ။
He isalot better than your group now.
7 April 2013 at 11:59